यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न मन्त्रीको निर्देशन :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
शनिबार, जेठ १४, २०७९
निर्माण सामग्री/घर आवास
यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं, माघ १३
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री घनश्याम दाहालले यातायात कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्न निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार ललितपुरको एकान्तकुनास्थित यातायात कार्यालयको अनुगमन गर्दै यातायातका काममा बिचौलियाको प्रवेश रोक्नुपर्ने बताएका हुन्।
उनले यातायात सेवालाई चुस्त दुरूस्त ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि सुधारका कामहरू अघि बढाउनुपर्ने भएकोले मन्त्रालयले अब यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि व्यवहारिक काममा मात्रै नभई कानुनी कामलाई पनि अघि बढाएर लैजाने बताए।
मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा अझै पनि केही स्थानमा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएकोले मन्त्रालयले त्यसलाई परिपूर्ति गरी अगाडि बढ्ने आश्वासन दिए।
उनले यातायात कार्यालयमा रहेको विभिन्न समयदेखिका ठूला ढड्डाहरूलाई अनलाइनमा राख्नको लागि समस्या भइरहेको भन्दै त्यसलाई क्रमशः समाधान गर्दै लैजाने बताए।
मन्त्री दाहालले भने,‘सेवालाई कसरी चुस्त दुरूस्त गर्ने भन्ने बारेमा पनि केही न केही सुधार गर्नुपर्छ। अर्को भनेको हिजोको हाम्रो काम गर्ने सिस्टम ढड्डामा राख्ने सिस्टमले पनि हामीलाई कतिपय ठाउँमा असजिलो भएको छ। त्यसलाई पनि हल गर्नुपर्ने छ। हामीसँग अहिले पनि कतिपय अवस्थामा दक्ष जनशक्ति कर्मचारीहरूको अभाव पनि छ। त्यसलाई पनि हल गर्नुपर्ने देखिएको छ।’
कार्यालयहरूलाई बदनाम गराउनतिर बिचौलियाहरू अलि बढी लागेको उनले बताए।
‘बिचौलियाहरूलाई रोक्नको लागि हामीले कार्यालयलाई पनि कडा निर्देशन गरेका छौं। पत्रकारहरूले पनि बेला बेलामा आएर बिचौलियाहरूको बारेमा एक्सपोज गरिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने सेवाग्राहीहरूले अनावश्यक पैसा खर्च नगरी काम गर्न सकिन्छ। त्यो हुँदा कतिपय डुब्लिकेसनलाई पनि रोक्न सक्छौं।’
मन्त्री दाहालले यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स नवीकरणको समस्या बढिरहेकोले यसलाई पनि समाधान गरेर अघि बढ्ने बताए।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ १३, २०७८, ०२:४७:१२
वान्ता हुने र ग्याष्ट्रिकको समस्या आएमा गर्भवतीले के गर्ने? (भिडिओ)
सेतोपाटीले चुनावी प्रक्षेपण र विश्लेषण गरेका १० सहर
काठमाडौंमा झन्डै १४ हजार भोट ल्याएका सुमन सायमिले भने- बालेनले मिलेर काम गरौं भनेका छन्
सेनाको जागिर छाडेर सार्वजनिक स्कुल सुधार्न हिँडेकी गीता रानीको कथा, युट्युबमा
फेवातालसहित पोखराका तालहरूको मापदण्ड घटाउने निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
निजगढबारे सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्ने अभियन्ता र बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताको भिडिओ ब्रिफिङ
निजगढबारे लिखित आदेश नआएकाले अन्यौल
दोहोरिएर पालिका प्रमुख उठेका आधाभन्दा बढी पराजित
निर्माण व्यवसायी भन्छन्- मूल्यवृद्धिले घर सम्पत्ति सबै गुमाउनु पर्ने अवस्था आउन थाल्यो
प्रयोगविहीन १९ वटामध्ये चार विमानस्थल आगामी वर्ष सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
बससेवा मार्फत टिकट काट्दा तीन जना यात्रुले पाए सुनको असर्फी
नेपाललाई इयुको प्रतिबन्ध सूचीबाट हटाउन माग
के यो पटक तोडिएला राजस्व घाटाको बजेट आउने सिलसिला?
नीति तथा कार्यक्रममाथि दुवै सदनमा ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव
किन दलित प्रतिनिधित्व शून्यप्रायः भयो सुदूरपश्चिम? इन्द्र टमाटा
'भाइ गाँजा खान्छौ कि क्या हो?' रबिन बुढाथोकी
गम्भीर अपराध मान्ने हो भने बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको तगारो किन? मञ्जु मिश्र
धनगढीको सन्देश- जितको बधाईभन्दा असल काममा आशीर्वाद दिने संस्कार बसोस् दिवाकर बागचन्द
अपाङ्गता हुनुमा मेरो के दोष? निर श्रेष्ठ
खुबसुरत धोका मानसी
कसिङ्गर धिरज बराल
एक मुठ्ठी विश्वास जनक जोशी
दोष र गाली राकेश कार्की